I-tube yokufakelwa kwe-induction ye-copper, ipayipi, ibha yensimbi yokunamathela
Ikhaya / Izicelo / I-Annealing ye-Induction / Ukukhishwa kwe-Induction
Isigaba: I-Annealing ye-Induction Tags: ukunamathela, i-annaaling zethusi lokungeniswa, ishubhu ye-annealing yethusi, lokungeniswa okungathandeki, inqubo yokumisa, i-iron wire annealing, ukuvuthwa okuphezulu kwemvamisa, ukufakwa kwe-induction, lokungeniswa kwe-annealing zethusi, inqubo yokungenisa
Kuyini ukuchithwa kwe-induction?
Le nqubo itshisa izinsimbi ezisuke zithole ukucubungula okuphawulekayo. Ukwamukela ukukhipha kunciphisa ubunzima, kuthuthukise udoti futhi kunciphise ukucindezeleka kwangaphakathi. Ukwesekwa komzimba okuphelele kuyinkqubo lapho isicwecwe esiphelele sokusebenza sithathwa khona. Nge-seam annealing (eyaziwa kahle ngokuthi i-seam normalizing), kuphela indawo ethintekile ekushiseni eyenziwe yinkqubo yokwelusa.
lokungenisa annaaling yethusi bari
Ukwamukela ukungenisa indle nokujwayelekile inikeza ukushisa okusheshayo, okunokwethenjelwa nendawo, ukulawula okushisa okuqondile, nokuhlanganiswa okulula kokulayini. Ukukhishwa kwesikhumba kusebenzisana nomsebenzi ngamunye ukucacisa ngqo, nezinhlelo zokulawula ziqhubeka nokuqapha yonke inqubo.
Ukwamukelwa kwe-induction nokujwayelekile kuyasetshenziswa kakhulu embonini ye-tub and pipe. Ibuye ifake i-wire, izinsimbi zensimbi, amajaji ommese kanye nezibhamu zethusi. Eqinisweni, ukubhaliswa kuyinto enhle cishe noma yimuphi umsebenzi wokulondoloza.
Okufanelekile izimpahla zokufakelwa kwe-induction kufaka phakathi i-DW-MF, i-DW-HF ne-DW-UHF yokukhipha insimbi.
Ukuxhunywa kwe-Annealing Brass Brass
I-Induction ye-Annealing Shaft Ekupheleni